Live Casino တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ? - Myanmar Online Game
အမြဲတမ်းတိုးတက်လျက်ရှိတဲ့ Casino တွေရဲ့ရေပန်းစားမှုဟာ Gaming industry ကို Level အသစ်တစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မယ့် ခြေလှမ်းအသစ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ Casino တွေကအရင်ကလို နေရာအတိအကျ၊ အချိန်အတိအကျကြီးနဲ့ မဟုတ်တော့ဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီး မြန်ဆန်တဲ့ Internet ကိုအသုံးပြုခြင်းက ပရိတ်သတ်တွေကို အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ပဲ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကစားနည်းတွေ ကစားလို့ရစေနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ Virtual Reality game တွေနဲ့ Live Casino တွေက Gambling Industry ရဲ့အနာဂတ်အသစ်တစ်ခုအတွက် ရှေ့ဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ 3D Virtual reality ကဘယ်သူ့ကိုမဆို Desktop နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Mobile Smartphone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အပို Headset တွေ Hardware တွေထပ်ဝယ်စရာမလိုပဲနဲ့ ပါဝင်လို့ရစေမှာပါ။ Hardware တွေဝယ်ပြီးသေချာဆော့ရင်တော့ ကစားရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပိုပြီး ကောင်းသွားစေတာပေါ့။ ဒါ့အပြင်ကို ထိပ်တန်းလုံခြုံရေးစနစ်တွေနဲ့ နည်းပညာတွေက ကစားသူတွေရဲ့ Sensitive Information တွေကို လုံခြုံမှုအာည့်နဲ့သိမ်းထားပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ကစားသူတွေက အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Provider တွေကဖန်တီးထားတဲ့ Game တွေစုထားတဲ့ နာမည်ကြီး ကာစီနို ကစားနည်းတွေကိုကစားရင်း လုံးဝအဆင်ပြေငြိမ့်ညောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံကိုခံစားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လဲ ကာစီနို တစ်ခုက “live” ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်နေတာလဲဆိုတာကို တွေးမိမှာပဲမဟုတ်လား? သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ လိုက်ဖ်ကာစီနို တွေက ပုံမှန် အွန်လိုင်းကာစီနို တွေနဲ့ ဘယ်လိုကွဲပြားလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင်။
Live Casino တွေက Online Casino တွေနဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားလဲ?
လိုက်ဖ်ကာစီနို နဲ့ဆိုရင်ကစားသူတွေက တစ်ကယ့် ကာစီနို တစ်ခုမှာရောက်နေသလိုမျိုး အတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝခံစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းကာစီနို မှာတော့ Real-time live process တွေမလိုပဲနဲ့ ကစားနိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရှိပါတယ်။ Live streaming video ကိုကစားသူကကြည့်ပြီးတော့ ကစားတဲ့ Process တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ရတာဖြစ်လို့ Land-based casino တစ်ခုမှာရောက်နေသလိုမျိုးကို အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ Dealer တွေ၊ အသုံးအနှုန်းတွေ အကုန်လုံးကို တွေ့ကြုံရမှာပါ။ Live Poker, Baccarat, Roulette, Blackjack တို့လိုမျိုး ကစားနည်းတွေအတွက်ဆိုရင် Dealer ကဒ်တွေကို Scanner တစ်ခုကနေဖြတ်ပြီးမှဝေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဝေလိုက်တဲ့ကဒ်ကို ကစားသူရဲ့ Screen မှာ UI တစ်ခုအနေနဲ့လဲပြန်မြင်ရပါတယ်။ ကစားသူတွေက ဝိုင်းထဲကတခြားကစားသူတွေ၊ Dealer တွေနဲ့ဆက်ဆံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Social ကျကျကစားချင်သူတွေအတွက်တော့ တစ်ကယ်ကိုအဆင်ပြေမှာပါ။
နောက်ထပ်ကြီးကြီးမားမာကွဲပြားချက်တစ်ခုက အွန်လိုင်းကာစီနို တစ်ခုအနေနဲ့ Random Number Generator တွေအသုံးပြုမှုပါပဲ။ အွန်လိုင်းကာစီနို တွေက Computer Simulation ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်ကယ့် ကာစီနို ကစားနည်းတွေရဲ့အရသာကို ဖန်တီးကြတယ်၊ လိုက်ဖ်ကာစီနို တွေကကျတော့ ကာစီနို တစ်ခုကိုရောက်သလိုမျိုးအတွေ့အကြုံပေးနိုင်တယ်။ ဆိုတော့ လိုက်ဖ်ကာစီနို မှာဆိုရင် Card Deck တွေကိုအသုံးပြုပြီး Dealer ကိုယ်တိုင်က ဝေပေးတာကိုကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းကာစီနို ကစားနည်းတွေမှာတော့ Random Number Generator ကဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ ကျပန်းကဒ်တွေနဲ့ ကစားရမှာပါ။
Live Casino Gaming ကတစ်ကယ်တမ်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ?
လိုက်ဖ်ကာစီနို တွေက ကစားသူတွေကို သူတို့ကြိုက်တဲ့ Table ကစားနည်းတွေ၊ Slot တွေကစားရတဲ့အခါမှာ တစ်ကယ့်ကို အဆင်ပြေတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေ၊ hi-tech စနစ်တွေကအမြဲတမ်း အသုံးပြုလျက်ပါပဲ။ Online Video streaming နဲ့ Bandwidth နည်းပညာက ကာစီနို software brand တွေကို လိုက်ဖ်ကာစီနို platform ဖန်တီးဖို့ အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပဲ။
High-quality ကစားနည်းတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက် လိုက်ဖ်ကာစီနို ကထိပ်တန်း Software provider တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကြိုးစားကြရတယ်။ အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ ကစားသူတွေမြင်ရမယ့် ကစားနည်းတွေကိုပြဖို့အတွက် Private Studio တစ်ခုပြင်ဆင်ပြီး ကစားဖို့အတွက် Table တွေ၊ Live Stream အတွက် Setup တွေပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ကစားသူအနေနဲ့ Live streaming ကနေတစ်ဆင့် ကာစီနို ကစားနည်းတော်တော်များများကို လှမ်းကြည့်နေလို့ရတယ်။
Table တစ်ခုခြင်းစီက နေရာသေချာချထားပြီးတော့ သေချာလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ Croupier, Dealer တွေက Card တွေ Chip တွေ Roulette Wheel တွေကို ကိုင်တွယ်ပေးကြပါတယ်။ ဒီလို Professional လဲကျ၊ Attractive လဲဖြစ်တဲ့ Dealer ချောချောလေးတွေက Croupier တွေရဲ့လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကို high-definition digital camera တွေပေါ်ကတစ်ဆင့် real time မှာလုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို လဲ Camera view point တစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ များသောအားဖြင့်တော့ ရှုထောင့်မတူပဲ ပြောင်းလဲပြီးတော့လဲ ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
Live Casino အတွေ့အကြုံရဲ့ အားသာချက်/အားနည်းချက် များ
Live Casino တိုင်းအလိုလိုမှာက Live Chat function ပါတာကြောင့် ကစားသူတွေက Dealer တွေနဲ့ စကားပြောလို့ရတယ်။ ဒီအချက်က Virtual table တစ်ခုကနေတစ်ဆင့် ကစားသူက တခြားကစားသူတွေ၊ Dealer တွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတာကြောင့် တစ်ကယ်ကိုတစ်ယောက်ထဲဆော့နေရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကစားသူတွေက ကစားပွဲဖြစ်နေသမျှအကုန်လုံးကို ကာစီနို တစ်ခုမှာရောက်နေတဲ့အတိုင်းမြင်ရတဲ့ Live Casino ဘက်ကိုပိုပြီးအားသာလာကြတယ် ဆိုပေမယ့်လဲ Live Casino မှာ သူ့အားနည်းချက်နဲ့သူတော့ရှိပါတယ်။
အသိသာဆုံးတစ်ခုက Connection ပြသနာနဲ့ တခြားနည်းပညာဆိုင်ရာပြသနာတွေ၊ ကစားပွဲက အွန်လိုင်းကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါတွေကမလွှဲမသွေကြုံရတဲ့အရာတွေပါ။ ကစားသူတွေက Connection ကောင်းကောင်းနဲ့ အတက်အကျမမြန်ပဲငြိမ်နေတဲ့ Internet ရှိတော့မှာ Video Streaming delay တွေမဖြစ်တော့မှာပါ။ Show တစ်ခုကြည့်သလိုမျိုး ကြည့်နေရရုံပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ဝင်ကစားနေရတာဖြစ်လို့ Delay ဖြစ်သွားလို့မရပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အွန်လိုင်းကာစီနို နဲ့ Landbased ကာစီနို တွေက Offer လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကစားနည်းအမျိုးအစားစုံလင်မှုတွေကိုတော့ လိုက်ဖ်ကာစီနို မှာစုံလင်စွာမြင်တွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။